Home » Amazon » Qalabka C4 Cuntada Lama Sameeyo 30 Lacag Cuntada ah ee iibka loogu talagalay $ 19.99
Dib-u-bixinta fayadhowrka waxay soo bandhigtaa Heshiiska C4-ka ee ka yimaada Amazon
Qalabka C4 Cuntada Xasaasiga ah 30 Adeegyada Lagu iibinayo $ 19.99!
Qalabka C4 waa budo udiyaarin ah. Kaniin budada ka hor ah wuxuu ka kooban yahay waxyaabo ay kuugu shubaan inta lagu jiro xilliyada tababarka culus. Qalabka C4 wuxuu ku siinayaa tamarta aad adigu rabto ee ugu dambeyntii bixisa. Qalabka C4 waxaa laga sameeyaa maaddooyinka ugu badan ee ay ka midka yihiin nitrate hal abuur leh taas oo ku siinaysa awoodda inaad ku daboosho muruqyadaada oo aad sare u qaaddo shaqadaada. Dib-u-celin dheeraad ah iyo kuwo kale oo badan ayaa gacanta ku haya iyagoo hagaajinaayo xoogagaaga iyo adkeysiga si aad u hesho maaddada ugu wanaagsan ee loo isticmaalo budada ka hor. Heshiiska C4 Cellucor wuxuu u yahay dhadhan qarsoodi oo kaliya. Sida laga soo xigtay faallooyinka Amazon, qaar ka mid ah dadka ayaa sheegay in ay dhadhanka la mid yihiin Piña Colada.